PhotoMatte-Unamandla wobume beFoto, iMontage, Collage Mac App kubaFoto. | Plum emangalisayo
NGOKUKHUSELEKILEYO NGOKUGQIBELA JUNI 23, 2014
IPrinceville, eHawaii - nge-23 kaJuni ka-2014 - iPlamu emangalisayo namhlanje ibhengeze ukukhutshwa kwePhotoMatte, umxholo omtsha wovavanyo olusisiseko olugxile kubume beefoto.
Khuphela apha uze uzame: umxokozelo
Nge-PhotoMatte, uyilo olunamandla kunye nomhleli wemizobo, kunye neefoto zakho ozithandayo, unokwenza montage emangalisayo okanye iikhola. Ifuna kuphela amanyathelo amathathu alula:
1. Khetha umxholo
2. Yilahla kwiifoto zakho
3. Thumela ngaphandle!
IfotoMatte yindlela entsha yokusebenzisa iifoto kwaye wabelane ngazo nabanye.
I-PhotoMatte ilula kakhulu ukuyisebenzisa kune-PhotoShop.
I-PhotoMatte ayibizi kakhulu kune-PhotoShop.
I-PhotoMatte ihamba ngaphaya komda, ikholaji kunye nobuchule bokubeka i-iPhoto kunye neApile.
IfotoMatte ineetemplate ezenza ukuba kudlalwe iikholaji zobungcali zomdlalo womntwana (kumnandi).
PhotoMatte ikuvumela ukuba wenze imixholo kwabanye kunye nokusebenzisa kwakho.
IfotoMatte sisixhobo esitsha esibalulekileyo kuzo zonke izixhobo zeefoto.
Izinto ezili-171 (ezinjengeesipili, iibhola zesiseko, njl njl.) Zokuphucula izinto zakho
Ngaphezulu kweefreyimu ezingama-25 zokuqaqambisa iifoto zakho
Iziphumo ezi-17 ezinamandla (ukusuka kuflashe, ngaphezulu kweemaski ukuya kwimaphu egreyidi)
Izikhokelo zevidiyo eziyi-15 ezichaza zonke izinto.
Ukukhuphela okuninzi kunye nokwabelana ngeendlela zokwabelana (OS X 10.8 Ukwabelana ngeNgonyama yaseNtabeni: I-Twitter, i-Facebook, i-Flickr, i-imeyile, iphepha ledesktop, njl. Njl.)
Yenzelwe isiNgesi, isiJamani nesiFrentshi Kwabaqalayo ukuya kwiingcali:
Yonke imixholo yenzelwe ngokufanelekileyo, ilungele ukusetyenziswa
Indlela yokukhusela ngokuchaseneyo ngokuchaseneyo nokulungiswa ngengozi
Lungisa ngokulula kunye nokuphucula imixholo ngemifanekiso, izicatshulwa, izinto kunye neziphumo
Ukuba uziva uyilo olongezelelekileyo, qala ukusuka ekuqaleni usebenzisa indlela yethu yokuHlela phambili
I-PhotoMatte ikukhokela kwisibini sokuqala
Izinto zokufundisa kunye neeNgcebiso kunye namaqhinga
Izikhokelo zokukhokela xa usebenzisa uMgangatho wePro-grade:
Imvelaphi ephezulu nesigqibo kunye nezinto ezinokuprintwa okuphezulu
Izinto ezichaziweyo zibonisa, elubala
Ukuhanjiswa kwexabiso eliphakathi kuyaxhaswa
Ubume be-3D ngobude obujolise ngqo kwikhamera
Uyilo olusisiseko olusisiseko olusisiseko
Jonga Iziphumo ezisetyenzisiweyo ngexesha elifanelekileyo
Imaski yesiqhelo kunye nezinto ezenziwe ngazo
Ukuphindaphindwa kwezithuba ezikhoyo zenziwe lula
Ukufakwa isiphumo okungenasiphelo (amathunzi amaninzi, izakhelo, njl.njl.)
I-PhotoMatte yindawo enobuchule obunamandla montage, ikholaji kunye ne-enjini yemizobo yeefoto ezisebenzisa iMac OS. IfotoMatte yenziwa ngabantu abadala iWatermark.
Iilayisensi zokuhlaziya ziyafumaneka kumalungu eendaba. Ukuba unomdla wokujonga kwakhona i-SpeechMaker nceda uqhagamshelane noJulian Miller (julian@plumamazing.com).
Ulwazi oluninzi malunga neFotoMatte
I-Plum emangalisayo igxila ekwenzeni imveliso kunye nesoftware enefoto ye-OS X, i-iOS, iWindows kunye neWindows. Phakathi kweemveliso zabo ezidumileyo zezi Kopa uncamathisele, iKey, iClock, iWatermark, I-PixelStick, IncokoMaker kwaye IfotoMatte.